General - Creativos Online | Creativos Online (Pejy 7)
dia midika hoe
Avadiho ho loko HEX ny RGB
Avadiho ho CMYK ny loko RGB
Avadiho ny loko CMYK ho RGB
Avadiho ny loko HEX ho RGB
Safidio ny loko
Marika ASCII / HTML
Famerenana sary Nvidia izay tsy nampiasa afa-tsy Adobe Illustrator
Fandikana iray izay mampiseho ny fomba ahafahanao manatratra asa avo lenta amin'ny fampiasana pensily sy gradients ny Illustrator.
Ahoana no fomba hamoronana katalaogim-bokatra namboarina tsara na Flyer miaraka amin'ny Sprightly
Raha mila mamorona katalaogna, tapakila, lisitra na karatra ianao, Sprightly avy amin'nyrososft dia fampiharana tena mahaliana miaraka amina endrika tsara ao anaty modely
Sarin'ny fahavaratra amin'ny ala any Japon feno afomanga
Ireo sary ireo dia amboarina am-polony na an-jatony amin'izy ireo mba hampisehoana ny famirapiratan'ny afon'afo amin'ny alina Japoney any anaty ala.
Mampiasa fakan-tsary 160 taona ny mpaka sary mba hamoronana ireto sary tsara tarehy ireto
Giles Clement dia mpaka sary matihanina iray izay tia fatratra ny fitaovana analog, ka izany no nanolorany an'ity andiana sary ity.
Alefaso ny asany 11 taona amin'ny lafiny ara-bola mba hamoronana ireo vatan-kazo azo antoka ireo
Ity mpanakanto sokitra hazo ity dia nanapa-kevitra tamin'ny fiainany taona vitsy lasa izay tamin'ny nifindrany tamin'ny asany ara-bola ka hatramin'ny filàny be.
Ireo no sary nandresy an'ny National Geographic Traveler
Ny National Geographic Traveler 2016 dia namoaka ny sary mandresy izay loka telo no omena amin'ny sokajy telo: tanàna, kolontsaina ary olona.
Fabrizio Corneli dia milalao hazavana sy aloka amin'ny fomba mahavariana
Cornelli dia mpanakanto italiana izay mampiasa hazavana sy aloka handrindrana silhouette misy kalitao tsara amin'ny fahitana.
Wydr dia serivisy vaovao amin'ny fomba Tinder amin'ny fividianana kanto
Azonao atao ny mividy zavakanto amin'ny serivisy vaovao antsoina hoe Wydr izay mampiasa ny endrika famafana na fihetsika mba ho toy ny sangan'asa
Andiana tilikambo Isometrika miaraka amin'ny antsipiriany tsara amin'ny loko miloko
Coe Pohl dia mampiseho amintsika ny fahaizany ao amin'ny Illustrator hamaritana andiana tilikambo izay asehony avy amin'ny Behance miaraka amin'ny fomba isometrika.
National Geographic Tsy hamela anao ho adala amin'ny sary nomerika
National Geographic dia mampiseho amin'ny fomba ahafahany "misambotra" sary izay novaina ary tsy marin-toetra tanteraka izy ireo.
Ny marinina mamelombelona sy tsara an'i Javier Torices
Javier Torices dia mpanao hosodoko Espaniôla izay maniry fatratra ny rano ary mampiseho izany amin'ny fomba toy izany amin'ireo marina manana kalitao akrilika goavambe.
Pixar dia tsy hamorona tohiny intsony aorian'ny Incredibles 2
Disney tsy mikasa ny hanao tohiny intsony aorian'ny famoahana ny Incredibles 2 amin'ny 2019, hifantoka amin'ny tantara tany am-boalohany.
'The Floating Piers' dia hitondra anao hitsangatsangana eny ambonin'ny rano amin'ity farihy italiana ity
'The Floating Piers' no fametrahana ny fotokevitra napetrak'ilay mpanakanto Boligaria Christo izay mitondra mpitsidika saika mandeha amina rano ao amin'ny farihy italianina
Affinity Designer dia tonga amin'ny Windows miaraka amin'ny beta ho an'ny daholobe
Tonga eo amin'ny Windows amin'ny endrika beta ho an'ny daholobe ny Affinity Designer amin'ny farany mba hahafahanao manandrana ny iray amin'ireo safidy hafa amin'ny Adobe Illustrator
Torohevitra 80 momba ny sary amin'ny endrika sary izay hahatonga anao ho kintana fitifirana
Ireto misy torohevitra momba ny sary valo-polo hanampy anao hanatsara ny fanazaran-tena amin'ny tontolon'ny fitifirana.
Manova ny tanana ho amin'ny herin'ny maizina
Lisha dia mitondra antsika alohan'ny ilam-basy optika amin'ny tanany sy ny lokon'ny vatany izay mahasavoritaka antsika mba hitaomana ireo karazana vinavina rehetra.
Sary 12 mana-tsaina biby izay mitovy amin'ny tsy misy
Fanoharana 12 feno fahendrena nataon'i Gabe Pyle, tsy izany no fijerin'izy ireo rehefa mieritreritra rajako, sokatra na dinosaurus T-Rex ianao.
Sary hosodoko hyper-realistic an'ny vehivavy anaty rano
Resha Perimutter dia nitodika tany amin'ny hyperrealism ho an'ny andiana sary hosodoko antsoina hoe AQUA izay vehivavy, hazavana sy rano no mahery fihetsika.
Belin, mpanakanto graffiti Espaniôla, ary ny teknikan'ny famafazana mahery ao amin'ity sary hosodoko ity
Belin dia mpanakanto espaniola izay mampiseho teknika tsara amin'ny graffiti miaraka amin'ity sanganasa amin'ny antsipiriany maro ity ary afaka mamela anao ho talanjona.
Fianakaviana elefanta voasokitra tamin'ny tendron'ny pensilihazo
Cindy Chinn dia mpanakanto manafosafo ny tendron'ny pensilihazo. Amin'ity indray mitoraka ity dia fianakaviana elefanta miampita an'i Serengeti
Ity mpanakanto ity dia mamorona karazan-tsakafo voasokitra tanimanga rehetra
Kim Clough dia manana fahaiza-manao tsara amin'ny sary sokitra bitika mba hitondrana antsika ny kanto culinary tsara indrindra miaraka amin'ny tanimanga polimer.
Tranonkala maimaim-poana amin'ny Internet ho an'ny mpamorona sary
Amin'ny fiainany fohy, ny famolavolana sary dia niteraka saina maloto, manan-kery ary tsy mety maty. Vakio ny momba ny famolavolana ary ianaro isan'andro!
'Sary' avy amin'i Collettivo FX
Ny hakingan-tsaina ao amin'ilay hevitra dia mety hitarika ho amin'ny aingam-panahy nefa tsy mitaky talenta firy amin'ny sary, zavatra izay manaporofo ny Collettivvo FX
Teknika mahavariana an'i Lucia Pitallis hanovana ho karazana olo-malaza malaza rehetra
Lucia Pittalis dia mpanakanto fanovana ary afaka ny ho tonga olo-malaza malaza toa ny sarimihetsika Hollywood malaza sasany.
Tatoazy famoahana indroa nataon'i Andrey Lukovnikov
Ny fampiroboroboana indroa dia teknika iray be mpampiasa tato anatin'ny taona vitsivitsy ary hitantsika tamin'ny karazana fitenenana plastika rehetra. Tamin'ity indray mitoraka ity amin'ny tatoazy.
Ny hakanton'ireo bitika amin'ireo watercolors kely ireo
Mpanakanto 20 taona te-hanova ny fialamboliny ho asa ary handeha miaraka amin'ity andian-doko kely biby ity.
Fomba 10 hahatongavana ho mpamorona sary ratsy indrindra
Raha te ho mpamorona sary ratsy indrindra eto an-tany ianao dia vakio tsara ny fihetsika folo tokony horaisinao rehefa miasa ao anaty vondrona iray ianao.
Mpianatra zavakanto dia mampiasa makiazy hanovana ny vatany ho amin'ny herin'ny optika mahafinaritra
Dain Yoon dia mpianatra zavakanto 22 taona izay manana makiazy sy loko rano afaka mamorona an'ireny illusions optika ireny amin'ny vatany.
Mpanakanto an-tanàn-dehibe JR dia nahavita nanjavona ny Louvre tamin'ny alàlan'ny fiheveran-diso noforonina
Miaraka amin'ny fiheverana an-tsokosoko, ity mpanakanto an-tanàn-dehibe fantatry JR ity dia mahavita mampanjavona ny Museum Louvre hahafahan'ny mpijery mandray anjara.
Vokany fototra ampiasaina indrindra amin'ny Adobe Photoshop sy izay tokony ho fantatrao
Inona avy ireo vokatra fototra sy mahomby indrindra eo amin'ireo photomanipulator manomboka amin'ny tontolon'ny famolavolana? Mamaky hatrany!
Ohatra 50 sy toro-marika amin'ny marika miorina amin'ny isa XNUMX ho an'ny filalaovana simbolojika isa
Ahoana ny fomba filalaovana tarehimarika amin'ireo vahaolana ara-pahakingana sy matihanina amin'ny famoronana sary famantarana? Mamaky hatrany!
Ny firaisana ny natiora sy ny bronde nataon'i Romain Langlois
Romain Langlois niverina tamin'ny alimo, vy izay ampidiriny amin'ny sanganasany ankehitriny izay aingam-panahin'ny natiora fa tsy ny olona Ilay mpanao sary sokitra nianatra manokana Romain Langlois, dia nandalina boky momba ny fitsaboana sy ny sarintany anatomika hahafantarana ny vatan'olombelona
Làlana Hong Kong araka ny fahitan'ny mpaka sary mahafinaritra an'i Ho Ho
Nandao antsika i Fan Ho andro vitsivitsy lasa izay ary izany no antony handinihantsika ny sasany amin'ireo sariny tsara indrindra avy amin'ny andian-tantara ao Hong Kong
Ny lokon'ny lokony, ny aloka marina ary ny paleta miloko voafantina tsara amin'ity sary nomerika ity
Nathan Watkins dia mampiseho an'ity sary an-tsary nomerika ity amin'ny endri-tsoratry ny kalitao marobe toy ny loko miloko, ny paleta miloko voafantina ary ny aloka.
Inona no mety ho endrik'ireo logo an'ireo marika goavambe raha noforonin'ireo biby goavambe kanto izy ireo?
Hanao ahoana ny logo raha hatsangana ireo monster of art lehibe mba hamerenany endrika azy ireo? Vakio hatrany fa aza adino!
Mpanakanto makiazy iray hafa miaraka amin'ny ho avy mahafinaritra
Ity mpanakanto avy any Litoania ity dia mampiseho amintsika fa nahita fitiavam-po lehibe izy ary ity no makiazy mamorona menaka mampivarahontsana.
Ny fiainan'ny mpamorona sary namintina tamin'ny gif animated 13
Ny fanangonana gif animated 12 izay maneho tsara ny fanaon'ny mpamorona sary. Toa mahazatra azy ve izany? Mamakia hatrany ary avelao izahay hanome hevitra!
Ny animator Disney dia nanambara ny mety ho Frozen tamin'ny 2D sy ny sary mihetsika mahazatra
Ny animator Disney dia mampiseho ny fomba nanamboarana an'i Frozen tamin'ny sary mihetsika mahazatra ary nandalo ny tanan'ireo mpampita sy mpanentana.
Paingotra nify mihoatra ny 300.000 XNUMX hamorona ireo firafitry ny tanàn-dehibe mahavariana ireo
Mpanakanto iray mampiasa paosin-nify maherin'ny 300.000 mba hamoronana ireo rafitry ny tanàn-dehibe mahatalanjona ao anatin'ny andiany maherin'ny 10.
Masayuki Oki, mpaka sary, dia misambotra ny saka mania
Ilay mpaka sary Japoney Masayuki Oki dia naka ny toetran'ny saka saka maro nania izay monina ao amin'ny faritra Shitamachi any Tokyo
Sary sokitra biby vita amin'ny hazo sokitra ary saika toa velona
Rumerian dia natokana amin'ny sokitra hazo nandritra ny 30 taona mahery ary ny sary sokitra rehetra dia mampiseho izany. Mahaliana ny biby.
Tinta, dite, alikaola ary peta-kofehy ho an'ireo sary hosodoko somary manokana ireo
Carne Griffiths dia mitondra antsika ireto fanoharana ireto izay ampiasany dite, alikaola sy peta-kofehy mba hanamboarana fitaovana mifangaro tsara.
Toast iray arivo hamoronana ity zavakanto kanto ity
Mofo 1.000 XNUMX no mandrafitra an'io sanganasa kanto io izay mandray sombin-Vilnius any Litoania ho haingo ho an'ny ozinina fanaovana mofo.
Giulia Bernardelli dia mamorona sary hosodoko hafahafa amin'ny kafe raraka
Giulia Bernardelli dia mamorona zava-kanto mahavariana amin'ny alàlan'ny sakafo ho mpanelanelana aminy, amin'ity tranga manokana ity dia nandraraka kafe
Tsoratadidy miendrika biby kely mahafinaritra
Vasileva dia mpanakanto manana ny filan-keviny lehibe amin'ny famoronana ireo biby kely mahafatifaty ireo izay protas amin'ny tsoratadidy.
Fahatsiarovana ny fahatsiarovana ny mpianakavy tamin'ny alàlan'ny "sarona" sary tamin'ny lasa ankehitriny
Taylos Jones dia namoaka boky iray izay nanangonana ireo saripika taloha nopetahany takelaka teo amin'ilay toerana nakana azy ireo ihany
Kanto an-dalambe mamorona an'i Sandrine Estrade Boulet
Mpanakanto frantsay Sandrine Estrade Boulet maka sary ireo zavatra isan'andro amin'ny araben'i Paris, ary avy eo ...
Mpanakanto tatoazy iray, izay namoy ny sandriny, no manana ny prostesis voalohany amin'ny tatoazy
Namoy ny sandriny i Sheitan Tenet 22 taona lasa izay, saingy noho ny artista hafa dia afaka nampiasa prostesis manokana misy milina tatoazy eo aminy izy.
Ny sary hosodoko feno hosodoko an'i Mike Dargas
Mike Dargas dia mpanao hosodoko mpaka sary izay manao hosodoko lehibe izay anaovany sary hosodoko amin'ny ranon-javatra mandraraka.
Ny mpanakanto avy any Londres Rich McCor dia manavao ireo mari-pamantarana malaza amin'ny alàlan'ny fanapahana taratasy
Ny olona sasany dia mila manova tsangambato malaza. Rich McCor dia manao izany amin'ny sary nohetezana sy sary
Tsy mpamorona sary ianao raha ...
Tsy afaka milaza marina ianao fa mpamorona sary ianao mandra-piaina ny iray amin'ireo toe-javatra ireo. Tsy mieritreritra ve ianao?
Teknika mifangaro sy fanandramana nomerika ao amin'ny 'Cubiform Concept'
Will Atwood dia mitondra antsika amin'ny alàlan'ny teknika mifangaro izay afangaroy ny loko akrilika sy ny resina azony atao amin'ny alàlan'ny Blender sy plugin iray noforonin'i Pixar.
Vera 66.000 miaraka amin'ny sisa tavela amin'ny orana sy fandokoana voajanahary: lamba rongony mirefy 3.600 metatra toradroa
Mpanakanto iray mamorona sary hosodoko miaraka amina ekipa goavambe mampiasa kaopy plastika azo ovaina. Ahoana no nanaovan'izy ireo izany? Mamaky hatrany!
Biby 13 noforonina faribolana tonga lafatra 13
Dorota Pankowska dia nahazo aingam-panahy tamin'ny famoronana ny sary famantarana Twitter izay misy faribolana 13 tonga lafatra hisarihana ireo biby 13 ireo.
Donut sasany izay hitondra anao any ivelan'ny habakabaka
Ilay confectioner Iraniana h.rebel dia namorona ireo donat be siramamy ireo izay afaka mitondra antsika mankany amin'ny vahindanitra hafa mba hankafizantsika sakafo maivana tsara.
Ranon-drano goavambe amin'ny endrik'olona eo amin'ity sarivongana ity
Ny mpanao sary sokitra Okrainiana dia mampiseho amintsika amin'ny sary sokitra ny fifandraisan'ny olona sy ny singa anaovany ny ranonorana misy refy lehibe
Kanada dia manana farantsakely Star Trek izay azo ampiasaina ho vola mahazatra
Kanada dia nanao vola madinika Star Trek tena izy ho fahatsiarovana ny faha-50 taonan'ny franchise. Vola madinika vitsivitsy azonao ampiasaina.
Firavaka dragona izay hahatonga anao hahatsapa ho toy ny Daenerys Targaryen
Raha mpanaraka ianao na mpanaraka ny Game of Thrones, dia azo antoka fa ho tianao ireo firavaka ireo namboarina ho an'ny fotoana miaraka amin'ny dragona.
Ity no afisy ofisialin'ny sarimihetsika Disney vaovao 'Moana'
Moana no sarimihetsika Disney vaovao izay havoaka amin'ny 25 Novambra ary hitondra antsika any amin'ny Ranomasimbe Pasifika amin'ny alàlan'ny tantara epic
Hampiasa ireo mpamorona fehezanteny raha miteny "maloto" izy ireo
Andian-teny inona avy no hampiasan'ny mpamorona sary raha mampifangaro firaisana amin'ny asa izy ireo? Mamaky hatrany!
Antony 8 hanakaramana Freelancer fa tsy maso ivoho
Marina ve fa tsy miankina amin'ny matihanina ny freelancer? Marina ve fa mazàna lafo ny masoivoho? Ahoana no manapa-kevitra amin'ny roa safidy? Mamaky hatrany!
Ity no loko ratsy indrindra amin'ny spektrum rehetra
Ekipa mpikaroka aostralianina no nanapa-kevitra fa ny loko ratsy indrindra amin'ny fiparitahana dia ny loko maintso izay ho hita ao anaty paraky paraky.
Famoronana asa tanana nataon'i Hine Mizushima
Rehefa mieritreritra biby enina vita amin'ny lamba ianao, dia mety misy bera teddy na ...
Ireo loko mivadika amin'ity sarin'ny mason'i Dino Tomic ity
Dino Tomic dia mpikaroka fitenenana, teknika ary hevitra matetika izay manimba ny sanganasany amin'ny sira sy fasika, tahaka ny hitrangany amin'ity lohateny ity.
'Pine Forest', sary hoso-doko avy amin'i Ivan Shishkin
Shiskhin dia mpanao hosodoko rosiana iray izay tamin'ny androny dia tena tia fikajiana ny tontolon'ny ala ary afaka ahitantsika sary an-tsary tsy hita isa.
Ny fahitan'i Illustrator Simon Stålenhag amin'ny fomba fijery teknolojia amin'ny ho avy
Ny soedoa Simon Stålenhag avy any Suède dia maneho fifandonana tsy mahazo aina amin'izao fotoana izao sy ny ho avy izay toa hifandona ny olona toa antsika ...
'Hypersurface' dia sary pensilihazo mahafinaritra
Hypersurface dia sanganasan'i Daan Noppen izay mampiseho teknika lehibe amin'ny fanaovana sary ary safidy hendry amin'ny karazan-taratasy ampiasaina hanomezana azy ilay firafitra.
Ilay sary vongana fasika tsy mampino an'ny elefanta milanja fiainana milalao caturà misy totozy
Sary vongana fasika izay mametraka antsika alohan'ny lalao catur an'ny elefanta milanja fiainana sy totozy iray izay mijery azy miaraka amina endrika sarotra.
Ny sabatr'i Tutankhamun izay avy amin'ny meteorita
Nasehon'ny mpahay siansa fa ny vy ao amin'ny sabatra Tutankhamun dia avy amin'ny meteorita iray ka mahagaga ny olona rehetra.
Ny habibiana sy ny maratra amin'ity sary hosodoko menaka antsoina hoe 'Sparrow' ity
'Sparrow' dia sary hoso-doko vita amin'ny teknikan'ny Trompe l'oeil ary misy hafatra mahery vaika izay mamela ny olona tsy hiraharaha.
Mpandoko solika Photorealism telo manaitra
Chuck Close, Tjafl Sparnaay ary Ran Ortner dia mpanao hosodoko photorealistic avo lenta telo izay naneho ny kanto kanto nanomboka ny taona 60.
Ireo afisy Suicide Squad vaovao izay manome "fijery" hafa an'i Joker, Harley Quinn ary maro hafa
Suicide Squad, na eto Suicide Squad, dia nanangana omaly ny varotra izay ahafahantsika mividy ireo afisy vaovao.
Androany dia 90 taona i Marilyn Monroe: Ny andian-tsarimihetsika, ny sary tsara indrindra
Marilyn Monroe dia 90 taona androany, noho izany dia tianay ny hanome voninahitra kely avy amin'ny tanan'ilay mpaka sary miavaka Milton Greene sy ny andian-tsarimihetsika mainty.
Ny faha-500 taonan'ny fahafatesan'i Bosco, enigma XNUMX taona
Miaraka amin'ny fampirantiana izay nanomboka omaly, ny Prado Museum dia mahatsiaro ny faha-XNUMX taonan'ny fahafatesan'i Bosco, ilay mpanao hosodoko tena feno enigma.
Fantatra fa nanelingelina ireo sariny angano i McCurry, angano sary
Fisolokiana tanteraka ny fanaovan-gazety an'i McCurry, iray amin'ireo angano momba ny sary, izay nanodinkodina ny ankamaroan'ny sariny tamin'ny Photoshop.
Manova ho lasa biby goavambe ataon'ny zatovo Lara Wirth
Lara Wirth dia mpanakanto makiazy 16 taona izay liana amin'ny fanovana ho lasa biby goavam-be mahatsiravina.
Nisy nametraka solomaso tamin'ny gorodon'ny tranombakoka ary nihevitra ireo mpitsidika fa zavakanto izany
Napetraka tamin'ny tany ny solomaso, ary mpitsidika maro no nihevitra fa ao anatin'ny fampirantiana Museum of Modern Art ao San Francisco.
Makiko Futaki, animator an'ny Studio Ghibli, dia maty tamin'ny faha-58 taonany
Makiko Futaki, ankoatry ny niasa tao amin'ny Studio Ghibli tamin'ny horonantsary toa ny Princess Mononoke, dia nilalao ihany koa tao amin'ny Akira, Katsuhiro Otomo, legendary Akira.
Zootopia no sarimihetsika ofisialy faharoa avo indrindra amin'ny tantara Disney
Zootopia dia nanjary tamin'ny fomba ofisialy ny sarimihetsika farany avo indrindra faharoa an'ny Disney. Horonantsary mihetsika ho an'ny mpihaino rehetra.
Ny lohan'ny olona ao amin'ny galeria kanto bitika
Amin'ny kely indrindra dia afaka ny ho tompon'andraikitra amin'ny galeriana zavakanto malaza ianao noho ny fampirantiana nifaneraserana naroson'i Gabunia.
Sary mahafinaritra amin'ny filentehan'ny masoandro eny amin'ny arabe foana ao Tokyo
Ao amin'ny sarin'i Bohbot eny amin'ny araben'i Tokyo dia afaka mahita loko sy fandriam-pahalemana lehibe amin'ireo lalana an-tanàn-dehibe amin'ity tanàna lehibe ity isika.
Ilay mpanakanto mampiseho hazavana
Afaka maka sary hazavana ve ianao? Crisco, mpanakanto iray avy amin'ny italianina dia mamela antsika tsy miteny intsony amin'ny alàlan'ny sanganasany sary. Fantatrao ve izy? Mamaky hatrany!
Ireo tantara tsy azo antoka notantaraina tamin'ny alàlan'ny sarin'i Michal Zahornacky manokana
Ny anarany dia Michal Zahornacky, ary izy irery no mpaka sary kanto mahay eto Slovakia.
Ny sary erotika an'i Szilvia Schaffer
Szilvia Schaffer dia tsy olona manana teny marobe, ary nisy nilaza fa tsy sokajiana amin'ny sangan'asan'ny zavakanto am-bava ny sary.
Miditra amin'ny lapan'i Roma i Banksy
Banksy dia hampiranty, manomboka amin'ny roa andro ka hatramin'ny volana septambra, dia miasa 150 ao amin'ny lapan'i Roma. Ilay artista manohitra ny rafitra izay anisany
Ny teknika kanto antsoina hoe 'Inceptionism'
Avy amin'ny tranonkala Rosiana antsoina hoe Ostagram, ny mpampiasa dia mamorona sary roa natambatra tamin'ny tambajotra sy teknika neural antsoina hoe Inceptionism.
Tsy hanisa sary, horonan-tsary ary maro hafa intsony ny Twitter ao amin'ireo tarehin-tsoratra 140
Ity angamba no fanovana lehibe indrindra an'ny Twitter tamin'ny fanompoana hatramin'ny nanombohany. Twitter tamin'ny talata dia nanambara fanovana fanovana natao hanalavitra ny tenany amin'ireo endri-tsoratra 140 mampiady hevitra isaky ny fitsipiky ny sioka.
Helmets an'ny Stormtroopers Animalistic nataon'i Blank William
Blank William, mpamorona endrika any New York, dia nandika indray ny fiarovan-doha amin'ny kintana mpiady kintana ho andiana fiadiana mahery vaika mifono biby.
Ireo sary maro loko miaraka amina fehezan-teny sy natiora feno aingam-panahy anao amin'ny andronao
Sary miaraka amin'ny hafatra an'ity mpanoratra sy mpanakanto ity, izay voninkazo sy positivisme no toetra roa lehibe ananany.
Ireo logo malaza dia nanjary toy ny balaonina
Ity mpanakanto breziliana ity dia nandika sy nanamboatra ireto logo marika malaza ireto ho toy ny balaonina inflatable izay mety mandalo mitsingevana.
Maninona ny Designer no mila mijanona tsy tapaka hitombo
Raha freelancer ianao izay miasa ao an-trano, na mpamorona miasa amin'ny birao dia mila fotoana irery ianao hamoronana
Alao sary an-tsaina ny toetran'i Disney ho tena izy avy amin'i Jirka Väätäinen
Jirka Väätäinen dia mpahay sary tsy miankina manan-talenta sy mpamorona sary teraka ao Helsinki, Failandy. Ny foibeny amin'izao fotoana izao ...
Kitapo dite famoronana 15 indrindra ho an'ireo tia an'ity sakafo matsiro ity
Ny dite no zava-pisotro malaza indrindra eran-tany aorian'ny rano. Araka ny lazain'ny UN (FAO), kaopy enina miliara no misotro isan'andro
Ora 191 hisarihana Tompondakan'ny ligin'ny ligy 131
Ity mpanakanto ity dia nahasarika tompon-daka tamin'ny ligin'ny 191 an'ny Legends tao anatin'ny 131 ora, iray amin'ireo MOBA malaza indrindra amin'izao fotoana izao ary malaza amin'ny eSports
Ny takelaka taratasy izay takelaka misy sary ihany koa
Fantatrao ve ny notepad analog izay manditrika ny sary sy sary amin'ny fotoana iray? Mamaky hatrany!
Horita prehistorika nolokoina tamin'ny ranomainty fossilized azy mihoatra ny 95 tapitrisa taona
Mpanakanto holandey iray no nahazo ilay ranomainty nofosana 95 tapitrisa taona nanoratany horita valo-fito maty.
Ilay mpaka sary James Mollison ao amin'ny bokiny dia mampiseho ny toerana fatoriana ankizy manerantany
Ilay mpaka sary anglisy James Mollison dia nitety izao tontolo izao naka sary ny ankizy sy ny efitranony
Ireo zavaboary maroloko monina ao amin'ny kahie Anna Bucciarelli Studio
Anna Bucciarelli dia mpanao sary an-tsary tsy miankina mipetraka ankehitriny sy miasa any Toronto, Canada. Nahazo diplaoma tamin'ny BA (Voninahitra) amin'ny endrika sary avy amin'ny University of York
Mpanakanto Okrainiana Viktoria Kravchenko dia mitety izao tontolo izao mandoko varavarana mahafinaritra amin'ny loko rano
Ny mpanakanto tanora Viktoriya Kravchenko dia manintona sary hosodoko amin'ny varavarana manerana izao tontolo izao, ary mahatadidy fa ny varavarana koa dia mety ho zavakanto
Ny sary sokitra tariby dia mampiharihary karazana biby isan-karazany arakaraka ny fomba fijeriny
Matthieu Robert-Ortis dia manolotra sary sokitra vita amin'ny tariby izay, arakaraka ny fomba fijerinao azy, dia miova avy amin'ny zirafy mankany amin'ny elefanta.
Ny sary sokitra hazo dia notsatohan'i Jaime Molina hoho an-jatony
Ny mpanakanto Jaime Molina dia miasa amin'ny refy 2, 2,5 ary 3, mandika ny hatsarany amin'ny sary hosodoko lehibe ...
Scotch Trooper, mpaka sary, dia manambatra ny fitiavany an'i StormTroopers sy Whisky
Sarin'i Scotch Trooper ireo miaramila milalao mifanerasera amin'ilay ranoka volontany amin'ny endriny maro samihafa
Ny lamasinina any Frantsa dia novaina ho tranombakoka kanto
Raha te hijery asa kanto any Frantsa ianao dia angamba tsy manana afa-tsy ny mivezivezy amin'ny iray amin'ireo lamasinina hankafizanao ny iray amin'ireo mpanao hosodoko.
Ity sarivongana Losifera ity dia mety ho fampirantiana zavakanto mampatahotra indrindra
Ao amin'ity fiangonana ity, ny mpanakanto Paul Fryer dia mametraka ny iray amin'ireo asany mampatahotra indrindra amin'ny alàlan'ny fitondrana satana tenany ho eo afovoany amin'ity toerana ity izay masina tokoa amin'ny maro.
The Woork Co, studio famoronana Espaniola miaraka amin'ny fomba fijery mahaliana
The Woork Co dia studio famoronana Espaniola izay manana marika toy ny iray amin'ireo toetrany manokana ary ahafahanao mahita freshness be dia be.
Sary hosodoko nomerika mahafinaritra nataon'i Johannes Voss, mpanakanto alemana
Teraka tamin'ny 1988, Alemana. Johannes Voss dia mpaka sary sy mpanao hosodoko nomerika avy any Leipzig, ary tena mahavariana tokoa ny habeny.
Sary hosodoko nomerika surreal manaitra nataon'ny mpanakanto frantsay Cyril Rolando
28 taona i Cyril Rolando ary efa psikology klinika nandritra ny 6 taona. Mipetraka any atsimon'i Frantsa izy izao.
Lainga 10 mamitaka ny mpamorona sary foana
Efa sendra olana iray momba ny fahitsian'ny client anao ve ianao? Vakio hatrany ary zahao ny lainga ampiasainy indrindra!
Kaonty Twitter no mizara ny lokon'ny lokon'ny sarimihetsika malaza
Cinema Palettes dia kaonty Twitter izay mizara palette miloko sarimihetsika malaza ho loharanon'ny aingam-panahy ho an'ny hafa.
Ahoana no nampiasan'ny 'The Simpsons' ny Adobe Character Animator handefasana seho mivantana
Ny Simpsons dia nandefa fandaharana mivantana ary ankehitriny fantatsika ny tsiambaratelo sy ny programa izay nampiasaina tamin'ny fampielezam-peo.
Hetezo tsy mampino an'i Eiko Ojala miaraka amin'ny firafitra taratasy sy aloka
Eiko Ojala, ilay mpanao fanoharana estoniana, dia nitondra fahatsapana lalina sy firindrana ho an'ireo sary fanoharana nataony
Zavakanto an-dalambe amin'ny haavon'ny rano avy amin'i Sean Yoro
Sean Yoro (aka Hula), mpanakanto an-dalambe teratany Hawaii, dia namorona sary hosodoko hosodoko…
Octavi Navarro sy ny fitsaboana azy manokana amin'ny zavakanto pixel
Octavi Navarro dia miara-miasa amin'i Gilbert amin'ny lalao video mampientam-po vaovao izay ahitan'ny pixel zavakanto sary eo afovoan'ny fahitana.
Ity mpaka sary miavaka amin'ny horohoro ity dia mampiasa ny zanany amin'ny sariny
Hoffline dia mpaka sary manokana amin'ny fampihorohoroana izay mampiasa ny zanany manokana ho protagonista amin'ny sariny.
Anne Mondro dia nandany volafotsy 1000 ora hanamboarana fo marina mahitsy
Ny mpanakanto Anne Mondro dia mametraka zavakanto ao am-pony miaraka am-po am-po mahatalanjona
Fampiharana 8 ho an'ny mpamorona tsy noeritreretinao fa misy
Fantatrao ve hoe inona ireo fandrosoana farany amin'ny teknolojia eo amin'ny sehatray? Aza adino ireo fampiharana ireo!
Hazo 126 samihafa manerana an'izao tontolo izao amin'ny andiany 'Ny fiainana miafina amin'ny hazo'
Dina Brodsky dia mpanao sary monina any New York izay liana tamin'ny fanaovana sary ny hazo efa an-taonany maro izao.
Sarin'ny penina ranomainty feno zava-misy azo tsapain-tanana miaraka amina asa mandritra ny 250 ora
Paglia dia mandany fotoana kely amin'ny alàlan'ny sary mahavariana misy azy izay misy ny mainty sy fotsy manana ny toerany lehibe hanomezana ny asany tanjaka lehibe.
Ny sary mahavariana sary azo avy amin'ny sary izay mampiasa pensily miloko sy gel nataon'i Jose A. Lopez Vergara
Jose A Lopez Vergara, dia mpanakanto 21 taona monina any South Texas izay nahary sary andiana maso tsara tarehy sy be loatra.
Ny sary famantarana vaovao an'ny Los 40 Principales
Ahoana ny hevitrao momba ny sary famantarana vaovao natolotry ny gara Los 40 Principales?
Uomo Nero, sangan'asa kanto izay maneho ny antsoina hoe vava mahatsiravina
Di Piazza dia mametraka antsika alohan'ny iray amin'ny asany izay azontsika ampiasaina amin'ny fomba lavorary hiresahana ilay teny hoe horror vacui. Mpandoko iray izay miaro ny fomba fanabeazana tenebrist
Miverina i Studio Ghibli miaraka amin'ny 'The Red Turtle', horonantsary tsara tarehy niara-novokarina tamina studio frantsay
Ny Turtle Mena dia fiaraha-miombon'antoka Franco-Japoney nataon'ny talen'ny Michael Dudok de Wit izay nanoloran'ny Studio Ghibli ampahany amin'ny famatsiam-bola sy ny hevitra.
Ity no mety ho sary tsara indrindra hitanao tamin'i Steve Jobs
Mpanakanto Jason Mercier dia olona mamorona iray hafa mampiasa fitaovana Apple, ary angamba izy irery ihany no mamotika Mac amin'ny asany ara-bakiteny.
Ny tabilaon'ny talen'ny horonantsary kiran Akira Kurosawa
Akira Kurosawa dia talen'ny sarimihetsika mpiorina izay tena tia lafatra ary ny endriny dia misy sary hosodoko sy tabilao.
Mpanakanto Japoney no namorona firavaka nentanin'ny ranomasina tamin'ny lamba translucent
Mariko Kusumoto dia mpanakanto japoney izay manana tombana mialoha amin'ny firavaka vita amin'ny lamba translucent, araka ny asehon'ity andiany ity.
Ireo torolàlana famolavolana vaovao avy amin'ny Material Design
Ny Material Design dia nohavaozina miaraka amin'ny torolàlana famolavolana vaovao ho an'ny mpamorona antoko fahatelo hampihatra amin'ny rindranasa sy ny vokatra an-tranonkala.
Ian Spalter, lehiben'ny mpamorona Instagram, dia nivoaka niaro ny sary famantarana vaovao
Ny endrika vaovao amin'ny sary famantarana Instagram dia nahazo tsikera marobe ary izao vao tonga eo am-piandohana ny lohan'ny lehiben'ny endrika hiaro azy.
Ny amboradara mahatalanjona amin'ny raketa, kiraro ary fefy an'i Danielle Clough
Rakotra fanaovana peta-kofehy fa tsy fanaovana fanazaran-tena miaraka aminy, mampiasa kofehy matevina i Danielle Clough mba hamoronana sary aloe sy bibidia hafa miloko maro amin'ny raketa tenisy.
Graffiti sy sary hoso-doko nataon'i Colin van der Sluijs
Avy amin'ny antsipiriany kely indrindra naseho tamin'ny endrika vaky trano iray misy rihana, ny artista holandey Collin van der Sluijs dia naneho ny "fahafinaretan'ny tena manokana
Ireo graffiti sy sary hosodoko izay mampiaraka ny haitao, ny vazivazy ary ny tontolo voajanahary 'Wes21'
Miaraka amin'ny fahatsapana vazivazy mahatsikaiky sy fifehezana tsara ny tsifotra spray, mpanakanto Suisse Remo Lienhard (aka Wes21)
Ny asa tsara tarehy ambany poly Mat Szulik amin'ny tetikasa PolyWood
PolyWood dia andiana tarehimarika vita amin'ny 3D amin'ny fomba poly ambany izay mamela fitsaboana tsara tarehy nefa tsy manery ny fikajiana poligon amin'ny fitaovana.
Tondra-drano biby mahavariana an'i Tilen Ti
Tilen Ti dia mpanakanto Singaporiana iray izay nanjary manam-pahaizana manokana amin'ny fampiasana loko hosodoko amin'ny fahaizan'izy ireo tanteraka.
Rindrina mamirapiratra nolokoina teo ambanin'ny tetezana nataon'i Dasic Fernández
Ity any New York ity dia mampiseho ny fahaizan'ny fomba fijerin'ity artista shiliana antsoina hoe Dasic Fernández monina sy miasa ao amin'ity tanàna ity.
Ny sary namboarina tamin'ny sangan'asa akoratan'i Jolita Vaitkut
Jolita Vaitkut dia mpamorona sy mpanakanto, mamorona sy mampiditra hevitra miavaka. Fantatra voalohany amin'ny famoronana kanto izy
Ny sary famantarana sy ny endrika Instagram vaovao
Nohavaozina tanteraka tao amin'ny logo ny Instagram mba hanehoana ireo fanovana nosedrainy tato anatin'ny taona vitsivitsy ka isaorako ny mpiara-monina aminy.
'Mamatonalina any Paris' ao anaty menaka avy amin'i Ángel Villanueva
Ángel Villanueva dia mitondra antsika mankany amin'ny alina mahagaga any Paris amin'ity sary hosodoko misy ny sary ity izay nisamborana ny tontolo iainana tamin'ny alina Paris.
Sary hosodoko fanorohana tsy mahazatra an'i Natalie Irish
Mpanakanto any Houston, Natalie Irish, dia namorona sary hosodoko kanto miaraka amin'ny fitaovana tsy dia mahazatra indrindra, dia ny oroka
Vector Magic: Vectorize ny sarinao amin'ny fotoana firaketana
Ahoana ny fomba hahombiazana amin'ny laoniny ny rakitra raha tsy mandany fotoana be loatra isika? Miaraka amin'ny Vector Magic!
Tsy manao hosodoko afa-tsy amin'ny rantsan-tanan'i Iris Scott
Mpandoko iray izay fatra-pitia ny impressionisme ary mampiasa ny rantsan-tànany handoko ireo sanganasa miloko sy velona ireo.
Ny sanda manan-danja indrindra Pixar raha miresaka tantara
Pixar dia mamaly amin'ny iray amin'ireo torohevitra hendry indrindra azo omena olona iray izay te hanoratra tantara na boky.
Ny resak'i Keng lye dia zava-misy sy biby 3D vita amin'ny akrilika
Mpanakanto monina any Singapour Keng Lye dia mamorona sary sokitra, loko, résin ary fomba fijery miavaka toa ny biby
Sary mahavariana vita amin'ny sira nataon'i Dino Tomic
Dino Tomic, mpanaingo tatoazy manan-talenta monina any Kroasia fa mipetraka any Norvezy, dia tia mamorona sary azo tanterahina rehefa tsy manao tatoazy mpanjifa izy.
Ny miaramila imperial kilalao nanjakan'i Callahan izay namboarin'i Callahan
Ireo kilalao miaramila an'ny emperora avy amin'ny Star Wars dia ampiasain'i Callahan ao amin'ity andiany antsoina hoe Warfighters Galactic ity mba hanandramana hanao azy ireo ho olombelona.
Ny sambo tapaka dia namboarina tamin'ny teknika japoney taloha izay nampiasa kofehy volamena
Bailey dia mpanakanto manana tombana manokana amin'ny fanamboarana sambo miaraka amina teknika japoney taloha izay mampiasa kofehy volamena.
Baiting ireo mpilalao baolina kitra malaza indrindra eto an-tany
Ny soccer dia mampihetsika ny besinimaro eran'izao tontolo izao sy ny filàn'ity mpanakanto kolombiana ity izay manome sakafo ny mpilalao baolina kitra malaza indrindra amin'izao fotoana izao.
Sary manaitaitra mifototra amin'ny fiainan'ny tanora mpanakanto Elliana Esquivel
Elliana Esquivel dia mpaka sary iray 19 taona monina any North Carolina, Etazonia
Ny sary famantarana vaovao ho an'ny labiera Guinness avy amin'i Design Bridge
Guinness labiera dia manana sary famantarana vaovao noforonin'i Design Bridge, iray amin'ireo studio malaza indrindra monina any London. Ity no dingana famoronana.
Sary sokitra vy mahavariana an'i Gil Bruvel
Teraka tany Sydney (Aostralia) tamin'ny 1959, fa nitombo tany atsimon'i Frantsa. Gil Bruvel dia nanomboka nanandrana tamin'ny zavakanto tamin'ny faha-9 taonany tamin'ny rainy
Ny sary Surreal dia maneho ny fifandraisana misy eo amin'ny olombelona sy ny natiora avy amin'i Igor Morski
Mpamorona sary, mpanao sary ary mpamorona endrika Igor Morski ankehitriny dia mifantoka amin'ny zavakanto sary an-tsary mifangaro
Mofomamy mariazy 15 mahagaga sy mahira-tsaina
Fanangonana mahavariana ny mofomamy fampakaram-bady tany am-boalohany ary ambonin'izany rehetra izany, tena mampihomehy.
Ny sary sokitra haran-dranomasina tsara tarehy sy be pitsiny vita amin'ny hazo
Na dia mampiasa fanapahana hazo tamin'ny laser aza i Joshua Abarbanel, dia mendrika hotononina ireo firafitry ny haran-dranomasina misy azy.
Ny loko mangirana ao Viktoria Kravchenko
Victoria Kravchenko dia mitondra antsika eny an-dalambe any Portiogaly amin'ny alàlan'ny andian-doko-drano misy azy izay ahitana taratra teknika tsara sy loko miloko.
Ny sarin'ny Chema Madoz Espaniola izay hahatonga anao hijery indroa
Chema Madoz teraka tamin'ny 1958, Madrid, dia mpaka sary Espaniola malaza izay nahazo ny 'National Photography Prize' tamin'ny taona 2000
Drafitra famoronana amin'ny famolavolana logo: ohatra azo ampiharina tokony ho fantatrao
Ahoana no fomba famoronana sary famantarana? Inona no dingana famoronana tsara indrindra azontsika arahana mba hahazoana valiny tsara indrindra?
Misy fetran'ny famoronana ve rehefa mamorona sary famantarana minimalista?
Ny fetra dia matetika tsy misy ifandraisany amin'ny zavakanto sy ny endrika, fa rehefa mamorona sary famantarana minimalist dia mety misy izy ireo.
Ny artista iray dia manambatra sary an-jatony mba hanomezam-boninahitra ny natiora
LeMay dia mitondra antsika amin'ny sary izay ahitana ny sombiny tsirairay avy amina sary an-jatony noforoniny anaty collages.
Ny milina DuoGraph izay manao sary geometrika tsy manam-petra nataon'i Joe Freedman
Ny DuoGraph no milina fanaovana sary farany avy amin'ny mpamorona sy mpamorona Joe Freedman, izay 'Cycloid Drawing Machine' no namorona tafio-drivotra tamin'ny Internet.
Ballerina Olga Kuraeva dia maneho fihetseham-po amin'ny alàlan'ny hetsika dihy malefaka
Araka ny fanazavan'i Olga Kuraeva ao amin'ny Instagram, miaraka amin'ny dihiny dia "sady tsy filozofia, na asa", fa fomba iray hanehoana fihetsem-po
Ny freshness amin'ny sary nomerika an'i Lucy He
Lucy He dia mpanakanto nomerika izay mitondra antsika amin'ny fiainana andavanandro sy falifaly miaraka amin'ny sehatra samihafa izay kasainy amin'ny Adobe Photoshop.
Ireo fanoharana ireo dia manambara ireo karazan'olona roa eto amin'izao tontolo izao
Kilasy olona roa amin'ity andiana sary ity izay noforonin'i Rocha hamantarana ny mampiavaka azy tsirairay.
Kent MacDonald dia manambara tontolo anaty miloko amin'ny sariny miafina amin'ny tenany
Kent MacDonald dia aingam-panahy avy amin'ireo ala maitso izay anaovany ny tranony ao amin'ny nosy Vancouver, ary ampiasainy hamboly fiainana anaty trano miloko
Kanto Lego nataon'ny mpanakanto Japoney
Mpanakanto Japoney iray, ao anatin'ny ekipan'ny mpamorona maherin'ny 40 Lego, no namporisihina hamorona ireo sakafo ireo amin'ny sanganasa Lego.
Izahay dia mamakafaka ny penina Bamboo Stylus Duo
Bamboo Stylus Duo dia stylus Wacom izay mamela anao ho marimarina kokoa sy hahatsapa ho tsara kokoa rehefa manao sary sy manoratra amin'ny takelaka na finday avo lenta.
Andian-tsary an-tsary mampientam-po vita amin'ny penina mainty
Amin'ny penina mainty, filan'ny nofo sy zavakanto an-tànana no ahazoanao manao an'ity andian-tsary manaitra aingam-panahy ity.
Aingam-panahy avy amin'ny lohahevitra famolavolana sary '90
Tamin'ny taona 90 dia nisy lohahevitra miverimberina izay nampiasa ny fisehoan'ny programa famolavolana sary misy valiny manokana.
Kintana Hollywood mahazatra sy sary hosodoko malaza mifangaro amin'ity andiana Mashup ity
Mpanakanto italiana iray no mampifangaro kintana Hollywood sy sary hosodoko mahazatra mba hahazoana an'ity valiny mahagaga sy mahaliana ity.
Ny zaridainan'i Lia Melia
Lia Melia dia manana endrika manokana amin'ny famolavolana ireo marinina mitondra antsika alohan'ny hery sy ny tanjaky ny ranomasina amin'ny onjany.
Ravina maina toy ny sary sokitra nataon'i Susanna Bauer
Ny fiainana mbola i Susanna Bauer dia mitondra antsika amin'ireo sary sokitra izay ny ravina maina no tena mpihetsika.
Tantara an-tsary mampihomehy nataon'i Zac Gorman
Zac Gorman dia mampiasa GIF mihetsika mba hanomezana ny tantarany amina sary mihetsika sasany hanasongadinana ireo fotoana manan-danja amin'ny tantara an-tsary.
Sary an-tsary kely nataon'i Claudia Maccecchini nahazo aingam-panahy
Claudia Maccechini (Claudym) no anarany ary mpanakanto italiana manana ny fahaizany manazava ireo sary mihetsika kolontsaina pop ao amin'ny Microdetails.
Ireo sary ireo dia mizaha ny antsipirian'ny volom-borona manerana an'izao tontolo izao
Ny sarin'i Robert Clark dia mitondra antsika amin'ny antsipiriany momba ny volom-borona amin'ny karazam-borona samihafa izay asehony amin'ny fomba ambony.
Ny hatsaran-tarehy sy zava-matsiro an'ny vehivavy amin'ny hosodoko menaka manetriketrika an'i Serge Marshennikov
Marshennikov dia mpanao hosodoko rosiana izay nandalo ny iray amin'ireo akademia malaza indrindra eran'izao tontolo izao. Ny fitiavany ny vehivavy dia azo jerena amin'ny hosodoko menaka.
Ny fomba manokana amin'ny "dizitaly" amin'ny hosodoko menaka Jeremy Mann
Jeremy Mann afaka manafangaro anao noho ny fombany manokana izay mampiavaka azy amin'ireo mpanao hosodoko menaka hafa ankehitriny miaraka amin'ireo sangan'asany manokana.
Ny fijerena manaitra ny sarin'i Faiza Maghni
Ilay mpanakanto Faiza Maghni teraka tany Oran, Algeria, dia mpanao hoso-doko mahay manaitra ny zava-kanton'ny foko, ny sary bitika persiana ary ny sary hosodoko ankehitriny.
Ny fampiarahan'i Aliza Razell sary sy sary hosodoko tsy azo antoka
Tamin'ny faha-iraika amby roapolo taonany dia nanandrana andrana tamin'ny fomba samihafa ny mpanakanto Aliza Razell mba hamoronana sanganasa kanto mahavariana
Alex Gray sy ny psychedelia sary hosodoko
Alex Gray dia iray amin'ireo mpitondra tenin'ny hetsika psychedelic ary mpanakanto hajaina miaraka amina sary maro izy.
Trixel no Instagram an'ny pixel art
Raha fanananao ny pixel art, Trixel dia tambajotra sosialy vaovao mifantoka amin'ity karazana kanto informatika sy manokana ity.
Ny Marvel sy DC Art vita amin'ny vera namboarin'i Van orton design
Ireo kambana mirahalahy monina ao Tutín. Izay nom de guerre no famolavolana Van orton, mamorona ny zavakanto rehetra miaraka amina fahombiazana amin'ny fitaratra miloko
Ny zavatra isan'andro dia niova ho lasa zava-mahaliana
Bourilhon dia mpaka sary mpanakanto izay manana fahatsapana fomba fijery sy sary an-tsaina lehibe izay mitarika amin'ireo fanodikodinam-sary ireo.
Ny sambo Star Wars malaza indrindra dia mampiseho amin'ny an-tsipiriany
Darth Vader's Millennium Falcon, X Wing na TIE Fighter dia aseho amin'ity andiany noforonin'i Jenssen ity taorian'ny asa nandritra ny 10 taona.
Miderà an'i Prince, ilay mpilalao mahay indrindra nanova ny taovolony in-36 tamin'ny 1978 ka hatramin'ny 2013
Nanomboka tamin'ny 1978 ka hatramin'ny 2013 dia nanova ny taovolony in-36 i Prince ary naneho hatsaran-toetra lehibe izy ireo tamin'ny fitadiavana ny fombany sy ny antony nahatongavan'izy ireo.
Ronono sy ny vehivavy tsara tarehy nolokoina mitady ny korontana sy izay manjavozavo
Milk dia mpanakanto izay mampifangaro ny korontana amin'ireo manodidina azy ireo vehivavy tsara tarehy izay nolokoiny saika nahatratra fotorealisme.
Manompoa kafe iray kapoaka amin'ny fomba kanto
Salisbury dia mpanakanto iray izay matetika antsoina hoe baritas izay manana tombana mialoha amin'ny fanompoana kafe tena kanto
Volo-loko miloko maritrano an'i Maja Wronska
Ny mpanakanto poloney avy amin'ny rano Maja Wronska dia manohy mandoko ny fanehoana loko mipoaka ao anatin'ny maritrano eropeana
Mark Ferrari dia manazava amin'ny teknika fanaovana sary 8bit sary ho an'ny lalao Retro
Mark Ferrari dia nampiseho tamin'ny fihaonambe ny sasany amin'ireo teknika manan-danja indrindra amin'ny zavakanto pixel sy sary Retro, izay lamaody ankehitriny.
Orana ao amin'ny sary hosodoko 'Hongkong' an'i Wang Ling
Ling's "Hongkong" dia ohatra iray amin'ny asan'ny nomerika ary ny fomba azo andikana ny orana amin'ny alàlan'ny Photoshop amin'ny sary.
Ilay mpanakanto namelona ny sanganasan'i Klimt
Hanao ahoana ny hosodoko nataon'i Gustav Klimt amin'ny tena fiainana? Mamaky hatrany!
Ny sandry fahatelo amin'ny hosodoko menaka Jane Radstrom 'Sam'
Jane Radstrom dia mampihetsi-po antsika amin'ny antony mahatonga an'io sandry fahatelo amin'ny sary hosodoko menaka "Sam" avo lenta io, asa marefo sy tsara tarehy.
+15 Fanasana mariazy marobe
Fisafidianana ireo fanasana fampakaram-bady tany am-boalohany indrindra tamin'ny tranonkala.
Fanoharana nataon'i Hunt momba ny "Andro Fitsarana"
Caza dia mpanao sary niasa ho an'ny magazine amerikana malaza "Heavy Metal" ary niverina hitondra anay sombin-javatra tena miavaka
Torohevitra hiasa amin'ny takelakao style CSS3
Ahoana no fomba hamoronana takelaka style css3 amin'ny fomba tsara sy matihanina? Mamaky hatrany!
Ny mpanao sary sokitra, Matthew Simmonds, dia nanisy sary sokitra anatiny avy amin'ny vato marbra sy vato kely
Matthew Simmonds dia mpanakanto monina any Copenhagen izay manamboatra basilicas kely, rotunda, andry, amin'ny marbra sy vato
Medaly bitika kely manafina an'izao rehetra izao ao anatiny
Ledonne dia mpanakanto firavaka manao ireo medaly manokana ireo izay miafina ao anatiny ny tsiambaratelo an'izao rehetra izao.
Ny sary tsy nampoizina nataon'ny mpanakanto Christopher Lovell
Christopher Lovell dia mpanakanto monina any UK izay manampahaizana manokana amin'ny sary amin'ny orinasa sy akanjo.
Sary sokitra bitika nataon'i Jedediah Corwyn Voltz miorina manodidina ny trano hazo
Mpanakanto monina any Los Angeles (Jedediah Corwyn Voltz) dia manangana trano hazo kely voafono manodidina ny zava-maniry anaty trano na ny hazo bonsai
Ny sary fampirantiana indroa an'ity mpamily taxi japoney ity
Enomoto dia mitondra antsika amin'ny fijeriny sy ny fakany sary mamakivaky ny araben'i Tokyo amin'ireny sary roa mampiseho sary mivalona roa ireny.
Ny sary maritrano tsy manam-paharoa an'ny mpanakanto Japoney Emi Nakajima
Emi Nakajima dia mpanakanto japoney tsara tarehy 21 taona, teraka tamin'ny 1995 tamin'ny 4 febroary, izay manao sary mana-sary.
Nilaozana i Bowling Alley ary niova ho zava-niainana ara-teknolojia Meow Wolf
Noforonin'ny mpanakanto mpiangona 150 mpikambana antsoina hoe Meow Wolf, ny traikefa ara-kolontsaina dia mitoetra ao amin'ny lalan'ny bowling ilaozana any Santa Fe, New Mexico.
Ny fahatsapana lalina ao amin'ny sarin'i Artista Afarin Sajedi, mpanakanto Iraniana
Afarin Sajedi dia mpanakanto Iraniana izay mikasa ny hanaitra ny fahatsiarovanao, ny fihetseham-ponao ary ireo lafiny hafa amin'ny fiainanao miaraka amin'ny sariny.
Ny planeta hafahafa an'ny zavamaniry sy zavamaniry karamel avy amin'i David Brodeur
Ao anatin'ny 'Celestial-Series' azy, namorona tontolo hafahafa i David Brodeur, mpanakanto nomerika monina any Chicago
Ny trosa sinema any Hollywood amin'i John Alvin sy ny afisy sarimihetsika malaza
John Alvin dia mpanao sary mampiseho sary mihetsika Hollywood mahatalanjona izay niasa tao amin'ny Blade Runner, ET The Extraterrestrial ary maro hafa
BatMan: Nahazo naoty R ny Joke Killing
Ny isa R dia midika ho an'ny atiny matanjaka ary izy no loka nomena ny sarimiaina Batman: The Killing Joke.
Zavatra 20 tsy te hohenoin'ny mpamorona
Inona no tokony hotehirizinao ho anao fa tsy hizara amin'ny mpamorona anao? Mamaky hatrany!
Ny tontolo Hanna-Barbera dia miandry antsika amin'ny horonantsary mihetsika voalohany, SCOOB
Hisokatra ho an'ny rehetra ny tontolon'i Hanna-Barbera rehefa hisokatra amin'ny taona 2018 ny horonantsary mihetsika voalohany miaraka amin'ny SCOOB
Sary mampiady hevitra eo amin'ny lafiny maizina amin'ny fiarahamonina maoderina
Morski dia lehilahy poloney manana fahazavana izay mampiseho amintsika lafiny sy fomba fijery sasany amin'ity fiarahamonina maoderina atrehantsika isan'andro ity.
Dingana tsy miato miverina amin'ny mpamorona sary
Mila valifaty amin'ny mpamorona sary ve ianao? Mamaky hatrany!
Ny Saripika Mahavariana an'ny Trano Hafoin'i Matthias Haker
Matthias Haker dia teraka sy lehibe tany Potsdam, Alemana (1984), tamin'ny fotoana rehetra nitaovan'ny SLR azy manokana, fa ny hafaliana voalohany niaraka tamin'ny voalohany…
Kitapo famerenana famoronana maimaim-poana
Mitady famerenana mamorona alohan'ny hanombohana ny asa fikarohana ataonao? Mamaky hatrany!
'Ny Rose' amin'ny solika avy amin'i Alexie Antonov
Ny raozy dia asan'ny sary manokana nataon'i Alexei Antonov izay ahafahanao mianatra momba ny fomba fiasa miaraka amin'ny hazavana sy ny vinavinany amin'ity voninkazo ity
Ny fiaviany mahafinaritra an'i Kazuo Oga, iray amin'ireo mpanakanto izay mitovy amin'ny Studio Ghibli
Kazuo Oga dia faly amin'ny volany ho an'ny sasany amin'ireo sarimihetsika Studio Ghibli malaza toa an'i Princess Mononoke na My Neighbor Totoro.
La Sexta nanova ny sary famantarana: Marina sa tsia?
La Sexta manavao ny endriny orinasa amin'ny fanatsorana ny sary famantarana. Voadona sa malahelo?
Tontolo nofinofy izay mampifangaro ny tarehin'olombelona amin'ny natiora an'i Tomasz Alen Kopera
Mandoko menaka amin'ny canvas i Tomasz Alen Kopera. Ny natiora olombelona sy ny mistery an'izao rehetra izao no aingam-panahiny isan'andro. Ny sary hosodoko dia tototry ny marika izay matetika mifandraika amin'ny psyche olombelona sy ny fifandraisan'ny olona amin'ny tontolo manodidina.
Ny kiobanina sy ny tsy azo antoka dia afangaro amin'ireo tatoazy manokana ireo
Ity mpanakanto roa ireto dia mampifangaro endrika samy hafa amin'ny tatoazy mba hamoronana endrika tokana sy tena tany am-boalohany mba hanolorana zavatra hafa amin'ny mpanjifany
Ity angamba no sary mihetsika tsara indrindra amin'ny taona
Natao ho an'ny horonantsary mozika Ma'agalim an'i Jane Bordeaux, ity sangan'asan'ny sary mihetsika 3D ity dia asa be miaraka amina hafatra mahafinaritra
Ilay mpanakanto Steve McDonald dia mahita mpankafy vaovao miaraka amin'ny boky fandokoana olon-dehibe
Ilay boky fandokoana olon-dehibe mahafinaritra dia manolotra fomba milamina sy mamorona hijerena an'izao tontolo izao an'i Steve McDonald
Ny fipoahan'ny angovo sy ny fiainana lehibe amin'ny sary vongana varahina De la Vega
Ny sary vongana varahina an'i De La Vega dia misarika an'io hetsika io sy ny voajanahary amin'ny fanehoan'ireto ankizy ireto amin'ny seho andavanandro.
Ny alina sy ny fiaramanidina dia manasongadina ny hatsaran'ny sidina nataon'i Azul Obscura
Azul Obscura dia misambotra fiaramanidina izay mandalo matetika tsy hitan'ny mpandeha tsotra izay mazàna mandray ireny sidina ireny
Voninkazo 30.000 naato avy amin'ny valindrihana ho an'ity zaridaina manokana ity
Louse Law dia mametaka voninkazo an'arivony maro toa an'ity antsoina hoe "Garten" ity ary mametraka antsika alohan'ny panorama tena manokana
Fitaratra 17 metatra toradroa ho an'ity sary ity izay mamaky roa ny lanitra sy ny tany
Johansson dia mpanakanto fanodikodinana izay ny tanjony lehibe dia ny hampisafotofoto ny sainao ary handinika ny heviny sy ny fahitany.
Jiro 50.000 XNUMX hanova ny tany efitra ho tantara angano tsy azo antoka
Miaraka amin'ny jiro miisa 50.000 XNUMX i Munro dia mamadika tany efitra maina any Aostralia ho sehatry ny nofinofy ahafahantsika mamela ny fisainantsika ary mamela ny eritreritsika hisidina.
Sary 10 mamely ny fitiavana eo amin'ny ray sy ny zanany vavy kely
Soosh dia mpanakanto tena tanora iray izay mampiseho amintsika ny fikitika azy lehibe amin'ny loko rano amin'ity andiam-panoharana manaitra ity
Fanatanjahantena 30 an'ny olo-malaza angano an'ny Cartoon Network izay hahagaga anao
Iza no tsy mahatadidy ireo tantara angano izay nanaparitaka majika tamin'ny fahitalavitra tariby tamin'ny alàlan'ny Cartoon Network? Nampianatra ...
Fihetsiketsehana manimba 10 mahatsikaiky
Ny famoronana sy ny maha-izy azy dia mety hipoitra amin'ny fanaka an-dalambe mba hahatonga antsika ho fihomehezana sy fotoana fahasambarana tsy ampoizina
Cinzia Bolognesi dia manambatra ny zavakanto sy ny sary hamoronana sary mahafinaritra amin'ny iPhone-ny
Cinzia Bolognesi, mpaka sary sy mpanakanto manan-talenta avy any Italia, mahay mitifitra sary mahafinaritra, mamorona sary miavaka amin'ny ...
Kanto mahavariana nataon'i Tiffany Turrill
Tiffany Turrill dia mamorona sary mahafinaritra ho an'ny fonon'ny boky ho an'ny ankizy, boky an-tsary, kilalao filalaovana andraikitra, lalao kilalao ary…
Ilay fanoharana amin'ny sary avy amin'ny mason'ny mpanao sary Henn Kim
Henn Kim dia mitondra antsika alohan'ny fiainana andavanandro amin'ny zavatra maro sy ireo olona izay mandalo ny fiainantsika isan'andro
François Brunuelle: Ity mpaka sary ity dia natokana hitady olona roa tsy misy ifandraisany manerantany
Gaga anay i François Brunuelle amin'ity tetik'asa ity izay amoriany olona tsy fantatra izay mitovy .Mamakia hatrany!
Ny Hipster mikasika any Gresy fahiny nataon'i Léo Caillard
Léo Caillard dia ao anatin'ity taranaka vao misondrotra amin'ny sary ity, izay miasa amin'ny fijery tsy mahazatra. Far…
Ny hatsaran'ny matematika amin'ity boky fandokoana mahafinaritra ity
Boky fandokoana nataon'i Rafael Araujo, mpanao sary an-tsary ary mpanao mari-trano Venezoeliana, izay mitondra matematika fatratra amin'ny Kickstarter
Ny fanavaozana ny kisary Google Play vaovao
Ireo kisary Google Play vaovao dia nametraka ny accent tamin'ny loko ary mampiseho ny fomba hanohizan'ny Google ny fanavaozana ny tenany.
Tondra-drano mahafinaritra nataon'i Luqman Reza Mulyono, Indoneziana mpanakanto
Luqman Reza na malaza eran'izao tontolo izao amin'ny hoe 'jongkie' dia mpanakanto sy mpaka sary avy any Kota Wisata Batu, Indonesia
'masoandro 23' sy ny filàna mampiasa loko maro
Ny fampiasana ny menaka tenany handrafitra sisiny sy tampony dia fomba tsara hahazoana vokatra tsara toy ny 'sol 23'
Ny kanto mahafinaritra an'ny Aza mosarena: vaky sambo
Ny sangan'asa ho an'ny Aza Mosary: ​​vaky sambo dia mampiseho ny fivoaran'ny mpilalao hatramin'ny sary voalohany hatramin'ny farany ny fanitarana.
"Church of Metal" fametrahana goavana nataon'i Edward Tresoldi
Mampiasa harato tariby an-jatony metatra, ny mpanakanto Edoardo Tresoldi dia nanangana fandikana ny fiangonana kristiana tany am-boalohany izay nijoro teo amin'ny valan-javaboary araboolojika Siponto ankehitriny.
Ireo sary sokitra mahafinaritra an'i Michael Wilkinson
Ny zava-kanton'i Michael Wilkinson dia maneho ny zava-drehetra mahatalanjona sy kanto amin'ny fanahin'ny olombelona, ​​amin'ny fampiasana ny idealy hanehoana amintsika ny mety amin'ny fiainana.
Disney Pixar dia manambara tarehintsoratra 'Finding Dory' vaovao be mpitia
Finding Dory no sarimihetsika Disney Pixar vaovao izay hamely ny teatrantsika amin'ny fahavaratra ary ny tohin'ny Finding Nemo.
Manarona ny boky manokana an'i Aniko
Aniko dia manana fientanam-po be ary ity dia mamorona rakotra boky manokana miaraka amina teknika miavaka izay mampiavaka ny sanganasa tsirairay.
Moerkey dia mamadika ny lakile taloha sy ny vola madinika ho lasa zava-kanto
Michael fantatra amin'ny anarana hoe Moerkey dia mpanakanto avy any Horsham, Victoria (Aostralia). Ny mpanao asa tanana manan-talenta dia mamorona baolina, lovia kely ary sary sokitra namboarina avy amin'ny fanalahidy sy vola madinika nariana
Mpanakanto makiazy Tal Peleg dia mamorona seho mahagaga avy amin'ny sarimihetsika sy boky eo amin'ny hodi-masony
Tal Peleg dia mpanakanto makiazy manana famoronana be dia be izay mampiasa ny masony hitondrana antsika amin'ny sarimihetsika, mozika ary tantara malaza.
Adin'ny Titans ao amin'ny andian-tsarimihetsika 'Pencil vs Camera' an'i Ben Heine
Ben Heine dia mitondra antsika ny tolona mandrakizay eo amin'ny plastika sy ny nomerika, ny pensilihazo ary ny fakantsary amin'ity andiany antsoina hoe "Pencil vs Camera" ity
Tetikasa fakana sary azy: Araho ny sipany erak'izao tontolo izao
Murad Osmann dia mpaka sary iray izay nanova ny tambajotra tamin'ny tetikasany. Te hahita ve ianao?
Seho kely indrindra amin'ireo firavaka ireo noforonin'i Isabell Kiefhaber
Isabell Kiefhaber dia mpanakanto alemanina izay namorona andiana peratra misy seho bitika mitantara tantara kely
Tarehintsoratra Disney araka ny fahitan'i Heather Theurer
Heather Theurer dia namoaka andian-dahatsoratra vaovao momba an'i Alice ao Wonderland izay mitondra antsika amina asa misy zavatra mahatsiravina.
Ireo ve no logo ratsy indrindra?
Inona no fahitanao ireo logo ratsy indrindra teo amin'ny tantara? Misy logo ratsy kokoa noho ireo ve?
Ireo nudes artista an'i Peter Coulson
Teraka tamin'ny taona 1961 i Peter Coulson ary monina any Melbourne (Aostralia), Peter Coulson dia mpaka sary sy mpanatontosa sarimihetsika manokana momba ny sary amin'ny fanontana, lamaody, sary ary hatsaran-tarehy.
Loving Vincent, horonantsary mihetsika voalohany nopetahany diloilo tanteraka
Loving Vincent no sary mihetsika voalohany nopetahany diloilo manontolo mifototra amin'ny fiainan'ilay mpanao hosodoko holandey mamiratra Vincent Van Gogh
Sombin-kisendrasendra avy amin'ny sary mihetsika heverina ho aingam-panahy avy amin'ny Studio Ghibli
Mathias Zamecki dia mpanakanto izay manolotra andian-tsary an-tsary tsy andehanan'ny sary mihetsika iray izay entanin'ny Studio Ghibli
Mamorona sary vongana ephemeral eo afovoan'ny natiora
Ny sary sokitra nataon'i Andy Goldsworth dia efa tonta sy tsy misy dikany ka mandritra ny andro dia manjavona eo alohanay izy ireo manamarika ny tantarany
OpenToonz, ilay rindrambaiko fampihetseham-po maimaim-poana ampiasain'ny Studio Ghibli, efa misy izao
OpenToonz no rindrambaiko ampiasain'ny Studio Ghibli sy ny andian-dahatsoratra Futurama ary efa afaka maimaim-poana avy amin'i Github.
Zavatra 9 manelingelina ataon'ny mpamorona sary
Ny marina dia, hafahafa ny mpamorona sary amin'ny c ****. Tsia? Mamaky hatrany!
Pack of 100 Professional Flyers 2016
Mitady flyer matihanina amin'ny vanim-potoanan'ny fialantsasatra lohataona ianao? Mamaky hatrany!
Tranga finday namboarina niaraka tamin'ny voninkazo tena izy mba hitsena ny lohataona
Ny tranga an-tariby dia azo atao manokana amin'ny fomba maro, fa amin'ny lohataona, ireo noforonin'ny HouseOfBlings dia tonga lafatra.
Trano miendrika fantsona naorina eo afovoan'ny ala
Aibek Almassov dia mpanao mari-trano Tiorka iray izay namorona trano fantsom-panafody hipetraka eo afovoan'ny ala iray. Tena hisy izany rehefa mahita famatsiam-bola ianao
+ Covers amin'ny boky 40 izay misambotra
Tsy misy zavatra manaitra aingam-panahy toy ny rakotra boky, sa tsy izany? Tandremo ireo!
Safari Safari an-tanàn-dehibe
Zoo an-tanàn-dehibe no tolo-kevitra kanto naroson'i Julien Nonnon, mpanakanto sary iray izay manova ny alina any Paris
«Mihosotra» ny fitambaran'ireo nudes sy aizina tonga lafatra nataon'i Olivier Valsecchi
Olivier Valsecchi dia mpaka sary mizaka ny zom-pirenen'i Frantsa teraka tamin'ny 1979. Nianatra momba ny sary tao amin'ny 'ETPA School of Photography' tany Toulouse, France
Fotoana 1 minitra nandalovan'ny sary an'ny avatar
Tao anatin'ny iray minitra ity mpanakanto ity dia mampiseho amintsika ny fomba ahafahanao manamboatra sary nomerika amin'ny Adobe Illustrator ary hahavita famaranana lehibe
Ny hakingan-tsaina amin'ny fakàna sary an'ireo kilalao kely nataon'i Hernandez mpaka sary
Ny fakana sary an'i Hernandez dia mitondra antsika amina sary hosodoko mahavariana izay mamadika kilalao kely ho lasa andian-tsary mahafinaritra
Ny saribakoly porcelain manaitra ny fiainana an'ity artista rosiana ity
Marina Bychkova dia mitondra antsika amin'ireo saribakoly porcelain mahatalanjona miaraka amin'ny antsipiriany lehibe ary vita amin'ny fitaovana avo lenta
Fomba iray mahasarika hisarihana ny saina amin'ity volavolan-doka ho an'ny fivarotam-boky ity
Mint Vinetu dia fivarotam-boky any an-drenivohitr'i Lituania izay nanana hevitra tsara hampiasa ny "tanany tànana" ho an'ity fampielezana dokam-barotra tena mahomby ity.
Boky famolavolana sary 100 mety tsara amin'ireo fialantsasatra ireo
Te-hamaky boky tsara ve ianao amin'ity fialan-tsasatra ity? Izahay dia manolotra anao boky mahafinaritra 100!
'Voasary rà', nataon'i Eric Wert, nolalovan'i DeepDream
DeepDream dia tambajotra tsy miankina noforonin'i Google izay mitady endrika nianarana taloha. Nandalo io tambajotra io ny «Orange voasary».
Rindrambaiko Animation ampiasaina ao amin'ny Futurama sy Studio Ghibli dia ho afaka tsy ho ela
Toonz, ilay rindrambaiko mihetsika ampiasaina amin'ny sarimihetsika Futurama sy Studio Ghibli, afaka maimaim-poana amin'ny 26 martsa
Sarivongana biby tsy mampino vita amin'ny hazo sy vy nataon'i Jason Waldron [Lahatsary]
Jason Waldron dia nihalehibe tao afovoan'i Oregon izay nametrahany fankasitrahana lalina ny vondrom-piompiana sy ny zavaboary.
Jiro malina mamela ny zavamaniry maniry ao anaty trano tsy misy rano na tara-masoandro mivantana
Studio We Love Eames dia namorona ity jiro zavamaniry manokana ity izay mitondra maitso amin'ny toerana mihidy tsy misy tara-masoandro mivantana. Manokana ho an'ny mpamorona.
'God of Egypt' avy amin'i Maciej Kuciara
Kuciara dia mpanakanto iray izay niasa tao amin'ny Disney sy Columbia Pictures ankoatry ny hafa ary nitondra anay tamin'ity asa antsoina hoe "God of Egypt" ity
Mamorona tantara kely misy sary mihetsika ao anaty horonan-tsary miaraka amin'ny fampiharana Draw My Story
Raha manana fitaovana Android ianao dia afaka mamorona tantara kely mihetsika miaraka amin'ny fampiharana Draw My Story amin'